रक्सी खाएर यौन सम्पर्क गर्नु उचित कि, अनुचित ? - Dhangadhi Khabar
बिहिबार १३, कार्तिक २०७७ ०१:५६
रक्सी खाएर यौन सम्पर्क गर्नु उचित कि, अनुचित ?
रक्सी खाएर यौन सम्पर्क गर्दा बढी आनन्द आउछ भन्ने एक किसिमको भ्रम छ हाम्रो समाजमा । तर यो भ्रम मात्र हो।
मङ्गलबार १३, असोज २०७७ ११:०७ मा प्रकाशित
#रक्सी #यौन सम्पर्क